बर्दियामा हारेका बामदेव काठमाडौंमा जित्लान र !
October 9, 2018 12:07 pm
काठमाडौं । बामदेवलाई सांसद बनाउन नेकपाका नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै मानन्धरले पार्टी सचिवालयमा आफूले राजीनामा दिइसकेको बताए ।
मानन्धरले राजीनामा दिएसँगै नेता वामदेव गौतमका लागि चुनाव लड्ने बाटो खुलेको छ ।
गौतम प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया १ बाट कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग ७ सय ५३ मत अन्तरले पराजित भएका थिए।
उनले राजीनामा दिएसँगै कांग्रेसले पनि काठमाडौं सात आफ्नो उम्मेदवार विजय गराउने दावी गरेको छ । कांग्रेसका एक नेताले कुरा गर्दै बर्दियाबाट हारेका बामदेव के काठमाडौं ७ का बाट सांसद बन्लान त ? के जनताले पत्याउलान र भन्दै प्रश्न गरे ।
यसअघिनै जनताले नपल्याएको प्रतिनिधिलाई अहिले पनि जनताले नपत्याउने उनको दावी छ । कुनै निहित स्वार्थ रहेकाले गौतमले सांसद बन्न मरिहत्य गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस स्रोतले गौतमको पराजय निश्चित रहेको प्रतिकृया दिएको छ ।
सरकारका काम कारबाहीबाट आजित बनेका जनताले बाम गठबन्धनको सरकारको मुल्याङ्कन पनि उनको पराजयसँगै गर्ने कांग्रेसका एक नेताले अक्षर पाटीसँग कुरा गर्दै प्रतिकृया दिएका छन् ।